:: My Little World ::: ဘာလဲ ဘာလဲ..
Posted by Nay Nay Naing at 6/29/2009 06:33:00 PM
မြန်မြန်ပြီးပါစေ. ရာသီဥတုမကောင်းဘူး. ငြိမ်ငြိမ်နေပါ။ စိတ်ကိုလျော့ အိမ်ကိုမြန်မြန်ပြန် ရေချိုးသီချင်းနားထာင် သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ဖုံးပြောပါ။ စိတ်ပြေလက်ပျောက်။ တံခါးကြီးပိတ်မထားနဲ့။ ဖွင့်ထားပါ။
ဟင် ညွန်ကြားတာများသွားပြီ စ်ိတ်ညစ်နေပါတယ်ဆိုမှ..
My Company Not allowed to use Google Desktop also.
ကျွန်တော်တို့ရုံးလဲ ဘာဆိုဘာမှ သုံးလို့ရဘူး။ သို့ပေမယ့် ဌာနပိုင် ဝါယာလက် နက်ဝက်တစ်ခုထောင်ထားတယ်။ တခုခု ရုံးနက်ဝတ်ထဲက ထွက်ပြီမှ လုပ်လို့ရမယ့်ဟာဆို အဲဒီဝါယာလက် ထဲကနေသွားလုပ်ရတယ်။
ဘာမှစတ်ညစ်နဲ့။ အိုင်တီကုပ္မဏီမှာ လုပ်နေသ၍ ဒါမျိုးခဏခဏကြုံရမှာဗျ။ ကျွန်တော့လဲ အလုပ်များ များပြီဆို ည၁၀နာရီလောက်အထိ လုပ်ရတဲ့အပြင် စနေတောင် ဆင်းလိုက်ရသေး။ ကျွန်တော်ကတော့ များများ မစဉ်းစားဘူး အချိန်တန်ရင် ပြီးသွားမယ်လို့ဘဲ စဉ်းစားလိုက်တယ်။ လုပ်နိုင်သလောက်တော့ လုပ်လိုက်တာဘဲ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
Monday, June 29, 2009 7:34:00 PM
အဲဒါ စင်ကာပူမှာ အလုပ် လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ ပေးဆပ်မှုတွေပါ၊
စိတ်ရှည် သည်းခံ ဇွဲရှိရန် ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ် အတိုင်း တချိန်မှာ ပန်းတိုင်ကို ရောက်သွားမှာပါ
အဟက်အဟက် IT- Network ဌာနကလူတွေကိုမမုန်းပါ နဲ့ နော်
သူတို.လဲတာဝန်ရှိလို.စစ်ရတာပါ ဟိဟိ ကြိုကာထားမှ
Tuesday, June 30, 2009 12:36:00 PM
after readin this, i realized how much ppl hate my job :P
i don't usually go to the desk personally, email them and do it with remote desktop :P.
dont wanna go face to face.
Tuesday, June 30, 2009 8:53:00 PM
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တော်မီ့ဆီမှာလဲ မနေ့က အင်တာနက် အရမ်းနှေးနေတာ.. ISP ကိုဖုန်းဆက်မေးကြည့်တော့ နင်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ traffic high ဖြစ်နေတာတဲ့..အလုပ်မှာဆိုလဲ ကိုယ်တစ်ယောက်ပဲ အဲလိုတွေသုံးတာ..ကိုယ်ပဲ သူများတွေကို မသုံးနဲ့လို့လိုက်ပိတ်ရတာ..ဟီးဟီး..သူကပြောတော့ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးချင်းစီလိုက်ကြည့်ပြီး လိုက်ပိတ်ပြီး စမ်းကြည့်တယ်.. မျက်နှာပူတာနဲ့လိုက်မလုပ်လိုက်ဘူး..ဟဲဟဲ.. စပိကတော့ မနေ့က အတော်နှေးနေတယ်..ကိုယ်တိုင်တောင် မနေ့က ဘာမှဒေါင်းလုဒ်လဲမလုပ်ပါဘူး..ခါတိုင်းနေ့ဆိုလုပ်သေးတယ်.. အီးမေးလ်က ပါတဲ့ ဖိုင်တွေ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရင်တောင် 1/2kpbs လောက်နဲ့ပဲဆွဲနေတာလေ..